Ogaden News Agency (ONA) – Ururka OYSU Afrika oo kubadda cagta ku abaabulaya dhalinyarada
Ururka OYSU Afrika oo kubadda cagta ku abaabulaya dhalinyarada
Ururka dhalinyarada OYSU ee ku sugan dalka Kenya ayaa guntiga u xidhay in ay soo saaraan dhalinyaro waxtar u leh dadkooda isla markaan soo jiita dhalinyarada qowmiyadaha kale ee kula nool dalka sida dhalinyarada Soomaaliya, Kenya, Ugandh,Tanzania. Waxayna dhalinyarada Ogaadeeniya isbadal ka bilaabeen guud ahaan goobaha ay dhalinyarada isugu timaado gaar ahaan garoomada lagu ciyaaro iyaga oo abaabulay kooxo ciyaartoy ah iyo waliba kuwo kale oo sameeya bandhigyo hidaha iyo dhaqanka Ogaadeeniya.
Hadaba waxaa maanta magaalada Nairobi ay dhalinyarada OYSU ku qabteen kulan ciyaareed ay oogu magac dareen “Midnimo OYSU”, waxaana kulankaa lagu maamuusayey bisha Ramadaan. Kulankan oo ka dhacay dagmada Kamakunji gaar ahaan xaafada Eastlight oo ay ka soo qayb galeen Xubno ka tirsan maamulka OYSU ee dalka Kenya ayey dhalinyada ciyaarta ka hor u jeediyeen dadkii isugu yimid goobta khudbada isbarasho aha iyadoo G/xigeenka OYSU mudane Axmed Cabdulaahi Shihaab uu dhalinarada u fasirey ururka OYSU iyo himilada ururkooda loo sameeyey maadaama in badan oo dhalinyarada kamid ah ayna aqoonin Ururka OYSU.
Intii ay socodeen ciyaaraha waxaa barbar socoday abaabula iyo bandhigyo ay Oysu oogu talogashay in dhalinyarada ay ku barto qadiyada gobanimo udirarka Ogaadeeniya iyo halganka xaqa aha ee Ogaadeeniya ka socoda G/xigeenka Axmed Shihaab ayaa sheegay in muhiimadii kulankan maanta ay ka lahaayeen ay gaadheen ayan ka go’antahay sii wadida hawlaha dhalinyarada.